मैले किन मु* भनिनं ? ~ brazesh
मैले किन मु* भनिनं ?
ट्विटरमा एकजना मित्रको प्रश्न छ मलाई, मैले आफ्नो उपन्यासको विमोचनको बेला पाठ गरेको अध्यायमा प्रयोग भएको मुजी भन्ने शव्द किन आफै उच्चारण गरिनं । यसको उत्तर ट्विटरको १४० शव्दको बन्देजभित्र अटाउन नसक्ने हुनाले यहाँ दिने प्रयत्न गरेको छु । त्यो अध्यायमा मुजी यसरी प्रयोग भएको छ,
भैरे ट्याक्सी चलाउन थालेको थियो । एकदिन उसले मलाई भन्यो, “पन्ध्र दिनमा सिकाइदिन्छु तँलाई पनि । अनि हाम्रै साहुको एउटा गाडी चलाउन मिलाइदिन्छु । के भन्छस् ?”
मलाई ड्राइभर बन्ने रहर थिएन । मैले उसलाई भनेँ, “मलाई थाहा छ, मैले कति समय देखि भाडा तिर्न आफ्नो भाग पनि दिन सक्या छैन । म तँमाथि बोझ भएर बस्न चाहन्नँ । म जान्छु ।”
आँखाभरी आँसु गरेर भैरेले भन्यो, “मार्दिन्छु मुजीलाई अनि थाहा पाउँछ । तँ जाँदैमा चाहिँ को आएर मलाई पैसा दिन्छ ? मैले कहिले केही भनेको छु तँलाई ?”
मेरो पनि गह भरियो । मैले सोचेँ, “पैसा त मूर्ति उखेल्ने नि कमाउँछ नि । तर भैरे जस्तो साथी कमाउन गाह्रो हुन्छ ।”
मलाई आफू सम्पन्न भएको जस्ता लाग्यो ।
उक्त प्रसंगमा प्रयोग भएको त्यो शव्दले आत्मीयता देखाउँछ । तर पनि मैले विमोचनमा त्यसलाई उच्चारण गरिनं । किनभने त्यहाँ म भन्दा निकै वरिष्ठ र मैले आदर गर्ने मानिसहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । हामी साथीभाइसंग जमघटमा त्यो शव्द सजिलैसंग प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । तर घरमा आफ्ना बाबुआमाको अगाडि जति नै सहज भए पनि त्यो बोल्दैनौं । मैले विमोचनमा त्यही भएर उक्त शव्द नबोलेको हूँ । पात्र र परिस्थितिले माग्छन् भने कुनै पनि शव्दहरु लेख्न हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हामी अंग्रेजी साहित्य र सिनेमामा कुनै पनि शव्दलाई सजिलैसंग पचाउन सक्छौं भने नेपालीमा मात्र त्यो आपत्तिजनक वा छाडा किन लाग्छ हामीलाई ?
Anonymous April 24, 2013 at 3:21 PM
के तपाइं त्यो कथाको पात्र हो त्यो शब्द बोल्नलाई ? कथाको पात्र बेश्यालय जान्छ, तपाइं किन जानु हुन्न वा जानु भएन भन्ने प्रश्नले कुनै तुक राख्छ ?